Chakanaka Cylinder Mugadziri uye Fekitori | Tonghe
LUXMAIN inoomerera kuhutungamiriri hwehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, inonyatso shandisa iyo ISO9001: 2015 yemhando manejimendi manejimendi, uye yakagadzira yakaringana humburumbira chigadzirwa sisitimu yepamusoro, yepakati uye yakaderera kumanikidza, uye yakanyanya kushanda kumanikidza kwesirinda inosvika 70Mpa. Chigadzirwa chinoshandisa iyo JB / T10205-2010 yakajairwa, uye panguva imwechete inoita tsika dzakagadzirirwa dzinogona kusangana neIO, ChiGerman DIN, chiJapan JIS nemimwe mitemo. Iyo chigadzirwa maratidziro inovhara yakakura kukura saizi ine silinda dhayamita ye20-600mm uye sitiroko ye10-5000mm.
Iyo kambani inoshongedzwa neCCC machining nzvimbo, CNC lathes, hombe lathes, CNC yekugaya michina, makuru ma grinders, polishing michina, iwelding marobhoti uye imwe CNC uye yakajairika yekugadzirisa michina, pamwe nematatu-anoratidzira kuyera zviridzwa, hydraulic bhenji mabhenji uye kumwe kuyedza midziyo. Iine kuburitswa kwegore rega kwe 10,000 zviyero uye zvisiri zvakajairwa zvakajairwa zvakajairwa masirinda uye servo masirinda, iyo R&D uye yekugadzira kugona inoshandiswa zvakanyanya mukubhururuka, kugadzira mota uye kugadzirisa, michina yekuvaka, michina yekurima, general maindasitiri ekugadzira uye nyanzvi yeinjiniya.
Kugadziridza kwehunyanzvi ndiko kuiswa kwechigadzirwa kweLUXMAIN cylinders.
1. Iyo yakakosha servo cylinder yakagadzirirwa mota mugwagwa simulation bvunzo michina uye nendege kurodha bvunzo bhenji ine hutsinye hwekushanda mamiriro, kukwirira kunyatsoita, uye yakanyanya kuneta simba zvinodiwa.
2. Silinda yakakura yekusimbisa inokodzera ma bulldozers, vacheri uye mimwe michina mikuru yekuvaka. Mamiriro ekushanda akaomarara uye akaomarara, uye kuiswa chisimbiso uye michina zvimiro zvesilinda zviri kuda.
3. LUXMAIN ndiye wekutanga wekuChina anogadzira auto-beam calibration chimbo chinotsigira ma cylinders uye emagetsi hydraulic pombi zviteshi zvine anoshanda anomanikidza e70Mpa.
Pashure: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L6800 (A) iyo inogona kushandiswa kune mana-mavhiri kuenderana
Zvadaro: Akateedzana Nyowani simba remotokari bhatiri rinosimudza trolley L-E70
Yakapetwa kaviri Kuita Silinda
Imwechete Kuita Cylinder
Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota,